စောငျ့ရသူ – My Blog
ခုတငျပျေါဒူးလေးထောငျထိုငျနတေဲ့သူမ ထမီလေးကိုအသာမတငျပီးအမှေးရေးရေးနဲ့ခွသေလုံးလေးတကေိုပှတျသပျဆုပျ နယျပီးအနမျးလေးပေးလိုကျတယျ။ အပွငျပနျး အသားညိုတယျထငျရပမေဲ့ထမီဘဲအမွဲဝတျတဲ့ ခဈြသူလေးရဲ့အတှငျးသားလေးကဝငျးမှတျနတောဘဲ့ပေါငျသားလေးကိုအသာလေးလြာထိပျနဲ့ပှတျစှဲပေးပီး အတှငျးသားနုနုလေးကို စုတျစှဲလိုကျတယျ သူဆီကအသကျရူုသံလေးကွားနရေတာ နုညံ့သောအသားစိုငျနှဈခုအထိတှေ့ လကျတှကေ အတှငျးခံပနျးရောငျ ဖောငျးဖောငျးလေးဆီ အကှဲကြောငျးလေးအတိုငျးစုနျဆနျစှဲလိုကျတယျ သူမပေါငျမှာအနီကှကျလေးတအေစီရီ သူလူးလှနျ့လာနပွေီ အတှငျးခံလေးလဲစိုထိုငျးနပွေီ။
ခဈြသူ့ထမီလေးကိုအသာယာလေးဆှဲခြှတျလိုကျတယျ အိုး နမေထိထားတဲ့ပေါငျတံသှယျလေးတှကေ သေှးကွောစိမျးလေးတှတေောငျမွငျနရေတယျ့။ အောကျပိုငျးဗလာကငျြးသှားတဲ့သူမလေးကိုတကျမကျစှာကွညျ့နမေိတယျ။ပနျးနုရောငျပငျတီပျေါကဘဲအဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးငုံပီးအကှဲကွားလေးကိုလြာဖြားလေးနဲ့နာနာလေးထိုးလိုကျတယျ ။သူမအံသွစှာကွညျ့ရငျး ကနြေျာ့ခေါငျးကိုကိုငျဆံပငျတကေိုဖှတယျ။သူမဖငျလုံးလေးကိုညှဈဖွဈဆုတျနယျနရေငျး ဖုဖုလေးတခုလုံးဝါးမွို့နပေဈလိုကျတာ ဖငျလေးတှကေလဲအိစကျတငျးမာနတောဘဲ ကိုငျလို့ကောငျးလိုကျတာ သူမကကိုယျလုံးသိပျလှတော့ အရငျကဆိုအဝေးကဘဲကွညျွ့ပီးမှနျး ခဲ့ရတာလေ တှေးရငျးစိတျတပေိုထနျပွီးဘောငျးဘိလေးကိုဆှဲခြှတျလိုကျတယျ ။
ပေါငျကွားလေးတှကေဘောငျးဘီရာမထငျဘဲ ဖွူနတော အိုး အမှေးရေးရေးနဲ့ပိပိလေး တကျမကျစှာငုံခဲလိုကျတယျ အှနျးးး သူမဆီကညညျးသံသဲ့သဲ့လေး ကွားမိတော့ပေါငျအောကျက လကျထညျ့ပီး ပေါငျနှဈလုံးကွားထဲမကျြနှာကိုဖိနှဈထားလိုကျတယျ ပိပိလေးတခုလုံး ပါးစပျထဲငုံခဲ့ထားပီး လြာနဲ့အထဲမှာ ယကျပဈလိုကျတယျ သူမ ပိပိလေးမှာအရညျတှစေိမျ့စိမျ့ထှကျလာပီးအမှေးလေးတှကေ စိုလဲ့နပေီ။ အောကျခွအေဝလေးကိုလြှာဖြားလေး ထိုးထညျ့ကလိတော့ သူမထံမှ ညီးညူသံပိုကယျြလာတာ နားကြောစိမျ့တကျသှားတယျ။ ပိပိလေးကိုရသလောကျဖွဲ လြာကိုနကျနကျလေးထိုးထညျ့လိုကျတယျ နီရဲနတေဲ့အတှငျးသားတှကေို ကွညျ့ရငျး ညီတျောမောငျကွီးက တဆတျဆတျတုနျနတေယျဗြာ။ ကနြျောဒီခြိနျထညျ့လိုကျရငျသူမဘယျခံနိုငျလိမျ့မလဲ။ လိုးခငျြစိတျကို မွိုခရြငျးခြော့နေ ရတာလေ။ အခုဆိုကနြေျာ့ရဲ့ဂြာခကျြတှေ အောကျမှာသူမလဲပေါငျလေးကို ဟလိုကျစိလိုကျနဲ မကျြလုံးတောငျမဖှငျ့နိုငျ တော့ဘူး။ အစိလေးကိုခပြေေးရငျး စောကျခေါငျးလေးထဲ လြာနဲ့နာနာလေးမှပေေးလိုကျတာ ။
ဟားး အထဲ အရညျတှထှေကျလာတော့သူမတခြီပွီးသှားပွီ ဆိုတာသိလိုကျတယျလေ ။ရငျထဲမှာလှိုကျခနဲ့ဗြာ ကနြျောပေးတဲ့ကာမအရသာကို သူမထိထိမိမိရတယျ ဆိုတာသိလိုကျရလို့။ ကြှနျတျောရပျမနဘေဲစောကျစိလေးကိုငုံခဲရငျး အဝလေးထဲကို လကျခလယျလေးထညျ့မှလေိုကျတယျ။ စောကျရလေေးတှနေဲ့မို့ ခြောခနဲဝငျသှားတယျလေ။ သူမလဲကော့ပေးတယျ။ ကနြျောအားတကျသှားပီး သူမပိပိလေးကို ခြိုခဉျြစုတျသလို တအားစုတျငုံပဈတော့တာ။ လကျခလယျလေးနဲ့လဲ တရဇတျ လိုးပေးလိုကျတော့ သူမဆီက တကယျ့ကိုကာမသံ စဉျလေးတှထှေကျကလြာတော့တာဘဲ။ အား အား အငျးးး ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဟငျ့ ကိုကို ရယျ အား အား အား ဖငျလေးကိုမွှောကျပီး ကော့ပေးနတေော့တာ။ ကနြျောလဲ လကျခလယျနဲ့လိုးပေးရငျး ပိပိလေးကိုခြဲ့ပေးနလေိုကျတယျ ဒါမှလီးထညျ့ရငျနဲနဲအဆငျပွအေောငျလေ။ သူမအရမျးနာမှာစိုးလို့ပါ။ အရတှေစေိုရှဲနတေဲ့ပိပိလေးထဲကို လကျခလယျလေးနဲ့လကျညှိုးလေးကိုပူးပီးအသာလေးထညျ့ အစိလေးကိုငုံစုတျလိုကျတယျ။
သူမကတော့ တိမျလှာတှထေကျရောကျနသေလို မိနျးမောနလေရေဲ့။ အသာယာလေးလှုပျရှားရတာပေါ့လေ။ လကျနှဈခြောငျးပူးနဲ့ ပိပိလေးထဲကိုအသားမှပေေးနလေိုကျတယျ။သိပျနကျနကျမထိုးရဲသေးဘူးလေ။ အစိလေးကိုခြိုခဉျြစုတျသလိုစုတျနတေော့ သူမဘာသာကော့ကော့ပွီးလကျကိုလိုးနတေယျဗြာ။ ကနြျောလဲလကျကိုနကျသညျထကျနကျအောငျထိုးထညျ့မှပေဈလိုကျတယျ။ သူမနုတျဖြားက ကာမသံလေးတှကေ ဆူဆူညံနပေါရော။ လကျနှဈခြောငျးနဲ့အဆကျမပွတျလိုးပေးရငျး ပိပိတခုလုံးကိုနရောလပျမကနျြယကျ အစိလေးကို တပွှတျပွှတျစုတျပဈလိုကျတာ သူမတှနျ့လိမျ့ကော့တကျသှားတယျ။ ကနြျောလကျဝါးထဲမှာလဲ စောကျရထှေကျကတြာရှဲလို့။ နောကျတခြီပီးသှားတာသိလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ တကိုယျလုံးလဲထူပူနပေီ။ဒီထကျပိုထိနျးမထားနိုငျတော့ဘူးလေ။ ပေါငျလေးကိုအောကျကသိုငျးဖကျရငျး ပိပိလေးတခုလုံးကအရတှေကေိုကုနျအောငျယကျပဈလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ကိုလှမျးကွညျ့နတေဲ့သူမမကျြဝနျးတှထေဲမှာ တခုခုကိုဆာလောငျမှတျသိပျနမှေနျး ကောငျးကောငျးသိတယျလေ။ သူမရဲ့ပေါငျကွားထဲမှာဒူးထောကျထိုငျရငျး နိမျခညျြမွငျ့ခညျြလှိုကျမောနတေဲ့ အပျေါပိုငျးတှဆေီလကျတှရေောကျသှားတယျ။
ကွှရေညျသုတျပနျကနျးလေးတှမေောကျထားသလို ဖွူဖှေးမို့မောကျနတေဲ့ နို့လေးတှကေို ကောငျးကောငျးစုတျနယျရငျးနို့သီးပနျးရောငျလေးတှကေို ခပြေေးလိုကျတယျ။ အား ဟငျး ဟငျး သူမမကျြလုံးတှမှေေးစငျးပီးညညျးတှားနတေယျ။ အောကျကညီတျောမောငျကလဲ ထောငျထောငျနဲ့ ပိပိလေးကိုသှားစနတေယျလဗြော။ နို့တှကေိုတဖကျကိုအားရအောငျနယျ တဖကျကကိုအငမျးမရစှဲစို့ပဈလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့လကျတှကွေားမှာသူမကော့ပြံနပေီ။ ကနြျောနို့စို့တာရပျပီး လီးနဲ့စပအကှဲလေးအတိုငျးပှတျတိုကျပဈလိုကျတယျ။ နုညံ့တဲ့အသားစိုငျနှဈခုပှတျတိုကျမှုဟာ ရငျထဲမှာမီးတှပှေငျ့ထှကျကုနျတယျ။ အိပျရာခငျးတှကေိုစုတျကိုငျရငျးသူမ အံကိုကွိတျထားတယျ။ ရငျတခုလုံးနိမျ့ခညျြမွငျခညျြနဲ့အစှမျးကုနျစိတျလှုပျရှားနပေုံရတယျ။ ကနြျောကိုယျတိုငျလဲ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈတာရယျ လိုးခငျြစိတျတှရေယျကွောငျ့ တကိုယျလုံးထူပူတုနျရီနတေယျ။
ပိပိလေးထဲ လီးဒဈမွုတျလိုကျထုတျလိုကျလုပျရငျးဆှတယျ။ သူမပေါငျနှဈဖကျကိုကားပီး အသာလေးကော့ပေးတယျဗြာ။ ကနြျောလီးကိုပိပိလေးထဲ လေးပုံတဈပုံလောကျနှဈခလြိုကျ ပွနျထုတျလိုကျနဲ့အသားလေးလိုးပေးတယျ။ တခါထကျတခါ ပိုပိုနကျအောငျလီးကိုဖိသှငျးတယျ။ စေးကပျြနတေဲ့နံရံတှကေိုထိုးခှဲဝငျသှားရတာ လီးတခုလုံးဖီညှပျထားသလိုဘဲ။ ပွနျထုတျထဲခြိနျမှာလဲကပျြသိပျနတေဲ့ပိပိလေးကလီးကှိုငုံစှဲထားသလို ရငျထဲလှိုကျခနဲ လှိုကျခနဲ။ လိုးနရေငျးတနရောမှာ နံရံလေးတခုနဲ့သှားထောကျနတေယျ။ သူမပျေါမှောကျခလြိုကျရငျး နခမျးတှကေိုစုတျနမျးလိုကျ တယျ။ ဖငျကိုကွှပီးလီးကိုနောကျကိုပွနျဆှဲထုတျပီးတဆုံးဆောငျ့ခလြိုကျတယျ။ ကြောကိုသိုငျးဖကျထားတဲ့လကျတှကေ လကျသညျးတှနေဲ့ကုတျခွဈပီးမကျြစိစုံမှိတျအျောတယျ။ အား နာတယျ နာလိုကျတာ တဲ့။ ခနလေးနျော နောကျမနာတော့ဘူးနျော ခဈြလေး သူမကိုခြော့ရငျး လညျပငျးလေးတလြောကျစုတျနမျးလိုကျ နာလှနျးလို့မဲ့နတေဲ့ နခမျးလေးတှကေိုစုတျနမျးလိုကျနဲ့ အသာလေးညှောငျ့လိုးနလေိုကျတယျ။ နှဈယောကျလုံးဇောခြှေးတနေဲ့ဗြာ။
သူကိုသိမျးကွုံးဖကျရငျး လီးကိုတဝကျလောကျပွနျထုတျလိုကျထညျ့လိုကျနဲ့မှနျမှနျလေးလိုးပဈလိုကျတယျ။ သူမကတော့မကျြစိစုံမှိတျပီး ကနြေျာ့ကို ကဈြနအေောငျပွနျဖကျထားတယျ။ ပေါငျလေးကိုလဲဖွဲကားပီးအလိုကျသငျ့လေးနပေေးတယျ။ သူမကွိတျခံနတောတှတေော့ ကနြျောလဲအားတကျလာပီး သှကျသှကျလေးလိုးပေးရငျး နို့တှကေိုစုတျနယျပေး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုခွပေေးလိုကျတယျ။ ဇှတျ ဇှတျ ဇှတျ အှနျး အငျးး အငျး ဟငျး အငျး အပြိုပိပိလေးက ကွပျသိပျစေးပိုငျနတော လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ။ ကနြျောတအားမဆောငျ့ဘဲ ခပျသှကျသှကျမှနျမှနျလိုးပေးတယျ။ မဆောငျ့ရကျပါဘူး အသဈစကျစကျနံရံလေးတှကေ ကနြေျာ့ရဲ့လီးကိုကငျြ့သားမှမရသေးတာ။နောကျဆိုရငျတော့ စိတျကွိုကျပေါ့လေ။ တျောတျောလေးလိုးပီးတော့ သူမခံနိုငျလာပီထငျ၊ကနြေျာ့လီးထညျ့လိုကျတိုငျး ခါးလေးကော့ပေးပီး ပိပိကဆှဲညှဈထားတယျ။ ကနြျောလဲ တငျးမခံနိုငျတော့ဘူး။ဝတျလဈစလဈလေးနဲ့ တအငျးအငျး တအားအားအျောနတေဲ့ ခဈြသူလေးကိုအပျေါစီးကကွညျ့တာနဲ့တငျတဝကျကပီးခငျြနတော။
သူမ ကိုယျပျေါမှောကျခပြီးဂြိုငျးအောကျကနလေကျသိုငျး ပခုံးတှကေိုခိုအားယူ အဆုံးထိရောကျအောငျသှငျးပဈလိုကျတယျ ကနြျောလီးကွီးကို ဒဈထိဆှဲထုပျရငျး ပိပိလေးထဲကို သှကျသှကျလေးလိုးပဈတော့ သူမဆီက အျောညီးသံလေးတှေ ပလုံစီနပေီလေ။ ကနြေျာ့လညျပငျးကိုသိုငျးဖကျရငျး ကော့ပြံတှနျးလိမျနတေဲ့သူမနို့လေးတှကေ ကနြေျာ့ရငျအုံကိုပှတျတိုကျနတေယျ။ ပိပိလေးနဲ့ ကနြျောဆီးခုံကလဲ အခကျြကကြထြိခတျနတေယျ။လီးပွနျအထညျ့နဲ့ ကော့ပေးတာနဲ့အခကျြကကြလြှုပျရှားမိခြိနျတှစေိပျလာတယျ။ သူမဖငျလေးက အောကျကိုပွနျမကတြော့သလို ကနြေျာ့ကလဲအပျေါကအဆကျမပွတျကိုလိုးနတေော့တာ။ လီးကိုစုတျစှဲထားထဲ့ပိပိထဲလိုးနရေငျးတိမျတိုကျတှပေျေါစီးမြောသှားသလို အထှတျထိပျထိရောကျသှားကွပီ။ အား ကိုကိုရယျ သူမတှနျ့လိမျကောကျကှေးပီးကနြေျာ့ခါးကိုပေါငျနှဈဖကျနဲ့အသညှေပျထားသလို ကနြျောလဲသူမရဲ့ပိပိထဲလီးတဆုံးထညျ့ရငျးဆီးခုံကိုဖိတှနျးထားတယျ။ ရငျခှငျခငျြးအပျပီးတယောကျနဲ့တယောကျကဈြနအေောငျဖကျထားရငျးသူမနခမျးဖူးတှကေို အားပါးတရစုတျစှဲနမျးရှိုကျလိုကျတယျလေ။
အရမျးခဈြတယျကှာ… ကနြျောတို့နှဈယောကျယောကျဆန်ဒတှပွေညျ့သှားပီး တယောကျကိုတယောကျတငျးကွပျစှာဖကျရငျး အနမျးတှပေေး နမေိတယျ။ သူမနခမျးဖူးဖူးလေးကို စုတျဆှဲယူပီးမှေးကြူရငျးမေးလိုကျမိတယျ. ‘ကိုယျ့ကို ခဈြလားဟငျ’ သူမယဲ့ယဲ့ပွုံးပီးပွနျပွောတာက ‘အျော ကိုကိုရယျ။ မိနျးမသားတယောကျအတှကျ အပြိုစငျဘဝဆိုတာ တနျဖိုးအရှိဆုံးပါ။ အဲဒါကိုကို ကိုပေးလိုကျပီးလေ။ ဒီထကျပိုပီးဘယျလိုခဈြပွရအုံးမှာလဲ။’ အဲလိုပွောရငျးစိုကျကွညျ့နတေဲ့သူမမကျြဝနျးတှကေိုငေးကွညျ့ရငျးကကနြေျာ့ရငျထဲ ဘယျလိုခံစားမှုမြိုးမှနျးမသိဘူးဖွတျစီးဆငျးသှားတယျ။ သူမကို ကဈြနအေောငျဖကျထားရငျး အားရအောငျနမျးပဈလိုကျတယျ။ အနမျးတှထေဲမှာတကျမကျနှဈသကျမှုတှေ မခှဲနိုငျမခှာရကျ ခဈြခွငျးတရားတှအေပွညျ့။ခွရေငျးမှစောငျကိုဆှဲယူပီးမောဟိုကျနသေောသူမကိုရငျခှငျထဲဆှဲထညျ့ကာနှဈယောကျသားခွုံအိပျပဈလိုကျသညျ။
ခနပါဘဲ မှေးခနဲပြျောသှားပွီးပွနျနိုးတော့သူမကရငျခှငျထဲမှာအိပျနတေုနျး။ သူမဆံနှယျလေးတှကေို အသာယာပငျ့သပျတငျပေးပွီး နဖူးလေးကိုနမျးလိုကျတယျ။ခဈြသူလေးနိုးမှာစိုးလို့အိပျယာက အသာလေးထ စောငျလေးပွငျခွုံပေးလိုကျတယျ။ အဝတျတနျးပျေါက တဘကျကိုခါးမှာစညျးပီး ရခြေိုးခနျးဝငျရမေိုးသနျ့စငျ အဝတျစားလဲပီးတဲ့ထိ သူမကအိပျနတေုနျးဗြ။ ကနြျော စာကွညျ့စားပှဲပျေါက note book လေးထဲမှာစာတခြို့ရေးပီး ကုတငျဘေးကစာပှဲအသေးလေးပျေါတငျပီး စားပှဲတငျနာရီနဲ့ဖိခဲ့လိုကျတယျ။ ခဈြလေး ကိုကို နလေ့ညျဝါးတီးအတှကျ သှားဝယျမယျ။ သော့ခတျခဲ့မယျ။ ဘယျသူလာလာမထှကျနဲ့။လူမရှိတဲ့အတိုငျးဘဲနနေျော။ ကနြျောအိပျအောကျထပျကိုဆငျးပီး ဖိနပျခြှတျက ခဈြလေးရဲ့ဖိနပျ ဧညျ့ခနျးထဲက လကျကိုငျအိပျကိုယူပီး ကနြေျာ့အခနျးထဲထညျ့တခါးတှအေားလုံးပိတျ တခါးမကွီးကိုသော့ခတျလိုကျတယျ။
ခွံထဲကဆိုငျကယျကိုမောငျးထှကျလာပီး ခွံတခါးကိုတခါသော့ခတျတယျ။ တလမျးကြျောကစားသောကျဆိုငျကို အမွနျလေးမောငျးထှကျခဲ့တယျ။ဒီဆိုငျကလကျရာကောငျးတော့ လူမြားပီးနဲနဲကွာတယျ။ ထမငျးဖွူ ခေါကျဆှဲကွျော အစိမျးကွျော အသားကငျတှမှောရငျး စီးကရကျတလိပျဖှာနလေိုကျတယျ။ ပွီးခဲ့သောအကွောငျးတှကေရုပျရှငျပွကှကျတှလေိုကနြေျာ့ခေါငျးထဲအစီရီပျေါလာသညျနှငျ့အမြှတှေးနမေိပီ။ကနြျော စိတျမထိနျးနိုငျလို့ ခဈြလေးအပျေါလှနျကြူးမိခဲ့ပွီ။ သူမကို ကနြျောတာဝနျယူရမယျ။ အမွနျဆုံးလကျထပျနိုငျအောငျ ကနြျောကွိုးစားရမယျ။ တာဝနျယူဖို့ဆိုသညျထကျ ခဈြလေးကိုမခှဲနိုငျအောငျခဈြမိလို့လကျထပျတယျဆိုပိုမှနျလိမျ့မယျ။ အကို မှာထားတာတှရေပီ အျော အေး အေး ဘယျလောကျကလြဲ ကနြျော ကသြငျ့ငှရှေငျးပီး စားစရာမြားကိုယူကာ ဆိုငျကယျကိုအမွနျမောငျးထှကျခဲ့တယျ။ စိတျထဲမှာသူမဆာနရေော့မယျပေါ့။
နဖူးလကေိုနမျးပီးထှကျသှားတာကို ခဈြလေးသိပါတယျ။ ယောကြာင်္း ပီသတဲ့ကိုယျနဟေနျထားနဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေိုအသာလေး အိပျခငျြယောငျဆွောငျပီးခိုးကွညျ့နမေိတယျ။ ကိုကိုကတော့မသိရှာ ကိုယျလုံးတီးနဲ့ သူလုပျစရာရှိတာလုပျနတေယျလေ။ တနျးလနျးတနျးလနျးနဲ့။ နောကျမှ တနျးပျေါကတဘကျကိုယူပီးခါးမှာပတျလိုကျလို့ တျောသေးတာပေါ့ မဟုတျရငျခဈြလေးရယျမိတော့မှာ။ သူစာထားပီးထှကျသှားတော့ ခကျြခငျြးမထသေးဘဲသူ့ခွသေံကိုနားထောငျနလေိုကျတယျ။ နောကျတခေါကျပွနျတကျလာသံကွားတော့ စောငျထဲပွနျပုကှေးနလေိုကျတယျ။ ခဈြလေး အိပျနဲ့ဖိနပျတှကေို လာထားတာ။ ဖိနပျကိုကိုငျလာတာ စိတျထဲအားနာမိသှားတယျ။ တံခါးပိတျသံ သော့ခတျသံ ဆိုငျကယျသံပြောကျသှားတော့မှ သကျပွငျးမောခရြငျး ပငျြးကြောဆနျ့လိုကျတယျ။
ပီးတော့သူထားခဲ့တဲ့စာလေးကို အမွနျသှားယူဖတျကြိပီး သူမကုတငျပျေါပကျလကျပွနျလှဲခရြငျး ပွုံးနမေိတယျ။ ကုတငျပျေါကထပီး ရခြေိုးခနျးဝငျ ရပေနျးခလုပျကိုနှိပျလိုကျတယျ။ အေးစိမျ့စိမျ့ရမှေုနျတှကေ ကိုယျလုံးတီးခန်ဒာကိုယျပျေါကခြေးညှျောတှကေိုတိုကျခြ သှားနိုငျပမေဲ့ ခဈြလေးဘဝလေးကိုပွနျလညျ မစငျကွယျစနေိုငျတော့ဘူးလေ။တှေးရငျးသကျပွငျးတခကျြခလြိုကျမိတယျ။ ကိုယျအနှံ့ပှတျသတျရငျး ပိပိလေးနရောကခြှဲကြိနတောတှကေို အသာလေးပှတျဆေးလိုကျတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျမို့ နာကငျြကြိနျးစပျစပျလေးဖွဈနတေယျ။
မိဘအုပျထိနျးမှု သှနျသငျမှုတှကေို စညျးကမျးတကနြဲ့လေးစားလိုကျနာရုံမက ကိုယျတိုငျဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးသူ မိမိကိုယျကိုတနျဖိုးထားထိနျးသိမျးတပျသူ။ သူမမကျြရညျတှကေ ရစေကျရပေေါကျတှနေဲ့ ရောယှကျကုနျပီ။ ရပေနျးအောကျမှာထိုငျခရြငျး မကျြဝနျးမှမကျြရညျဖွိုငျဖွိုငျကနြမေိတယျ။ အို ငိုနလေို့လဲ ငါကအပြိုပွနျဖွဈလာတာမှမဟုတျတာ။ ကိုကိုက ငါ့ကိုတကယျခဈြတာနမှောပါ။ ငါ့ကိုလကျထပျမှာပါ ခဈြလေးအတှေးနဲ့ စိတျကိုပွနျတငျးလိုကျတယျ။ ရပေနျးကိုပိတျ တဘကျကိုပတျပီး ရခြေိုးခနျးအပွငျပွနျထှကျလိုကျတယျ။ ခေါငျးကဆံပငျကို ရသေုပျရငျးမှနျတငျခုံရှမှေ့ထိုငျပီးသူကိုယျသူပွနျကွညျ့ လိုကျတယျ ငါအပြိုမဟုတျတော့ပါလား ယောကြာင်္းတယောကျနဲ့အလိုးခံပီးပီ ဆိုသောစိတျကပွနျဝငျလာပီး မကျြနှာညှိုးကသြှားတယျ။
စိတျကိုဖြောကျပီး ကိုယျ့မကျြနှာလေးကို သခြောကွညျ့လိုကျတယျ။ ခုနငိုထားတော့မကျြလုံးလေးကဖောငျးပီး နှာသီးလေးရဲနတော ကိုကိုပွနျလာရငျတှတေ့ော့မှာဘဲ။ မှနျတငျခုံပျေါမှာလဲ ယောကြာင်္းသုံးပစ်စညျးတှခေညျြးမို့ စလငျးဘကျအိပျကိုဖှငျ့ပီး အလှပွငျပစ်စညျးတှကေိုထုတျ အလှပွငျမယျလေ။ ခဈြလေးက ဘယျသှားသှား စုံစီနဖာဆောငျတပျသူမို့ ပစ်စညျးကအစုံနီးပါးပါတယျလေ။ နခမျးနီ၊ လကျသနျးလောကျနို့ရညျပုလငျးလေး၊မိတျကပျရညျပုလငျးသေးသေးလေး၊ ….. ကိုကို့မှနျတငျခုံပျေါ အကုနျစီခပြီးအလှပွငျရငျးကိုကို့ ကိုစောငျ့နလေိုကျတယျ …… ပွီးပါပွီ။
ခုတင်ပေါ်ဒူးလေးထောင်ထိုင်နေတဲ့သူမ ထမီလေးကိုအသာမတင်ပီးအမွှေးရေးရေးနဲ့ခြေသလုံးလေးတေကိုပွတ်သပ်ဆုပ် နယ်ပီးအနမ်းလေးပေးလိုက်တယ်။ အပြင်ပန်း အသားညိုတယ်ထင်ရပေမဲ့ထမီဘဲအမြဲဝတ်တဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့အတွင်းသားလေးကဝင်းမွတ်နေတာဘဲ့ပေါင်သားလေးကိုအသာလေးလျာထိပ်နဲ့ပွတ်စွဲပေးပီး အတွင်းသားနုနုလေးကို စုတ်စွဲလိုက်တယ် သူဆီကအသက်ရူုသံလေးကြားနေရတာ နုညံ့သောအသားစိုင်နှစ်ခုအထိတွေ့ လက်တွေက အတွင်းခံပန်းရောင် ဖောင်းဖောင်းလေးဆီ အကွဲကျောင်းလေးအတိုင်းစုန်ဆန်စွဲလိုက်တယ် သူမပေါင်မှာအနီကွက်လေးတေအစီရီ သူလူးလွန့်လာနေပြီ အတွင်းခံလေးလဲစိုထိုင်းနေပြီ။
ချစ်သူ့ထမီလေးကိုအသာယာလေးဆွဲချွတ်လိုက်တယ် အိုး နေမထိထားတဲ့ပေါင်တံသွယ်လေးတွေက သေွးကြောစိမ်းလေးတွေတောင်မြင်နေရတယ့်။ အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းသွားတဲ့သူမလေးကိုတက်မက်စွာကြည့်နေမိတယ်။ပန်းနုရောင်ပင်တီပေါ်ကဘဲအဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးငုံပီးအကွဲကြားလေးကိုလျာဖျားလေးနဲ့နာနာလေးထိုးလိုက်တယ် ။သူမအံသြစွာကြည့်ရင်း ကျနော့်ခေါင်းကိုကိုင်ဆံပင်တေကိုဖွတယ်။သူမဖင်လုံးလေးကိုညှစ်ဖြစ်ဆုတ်နယ်နေရင်း ဖုဖုလေးတခုလုံးဝါးမြို့နေပစ်လိုက်တာ ဖင်လေးတွေကလဲအိစက်တင်းမာနေတာဘဲ ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ သူမကကိုယ်လုံးသိပ်လှတော့ အရင်ကဆိုအဝေးကဘဲကြည်ြ့ပီးမှန်း ခဲ့ရတာလေ တွေးရင်းစိတ်တေပိုထန်ပြီးဘောင်းဘိလေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ် ။
ပေါင်ကြားလေးတွေကဘောင်းဘီရာမထင်ဘဲ ဖြူနေတာ အိုး အမွှေးရေးရေးနဲ့ပိပိလေး တက်မက်စွာငုံခဲလိုက်တယ် အွန်းးး သူမဆီကညည်းသံသဲ့သဲ့လေး ကြားမိတော့ပေါင်အောက်က လက်ထည့်ပီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲမျက်နှာကိုဖိနှစ်ထားလိုက်တယ် ပိပိလေးတခုလုံး ပါးစပ်ထဲငုံခဲ့ထားပီး လျာနဲ့အထဲမှာ ယက်ပစ်လိုက်တယ် သူမ ပိပိလေးမှာအရည်တွေစိမ့်စိမ့်ထွက်လာပီးအမွှေးလေးတွေက စိုလဲ့နေပီ။ အောက်ခြေအဝလေးကိုလျှာဖျားလေး ထိုးထည့်ကလိတော့ သူမထံမှ ညီးညူသံပိုကျယ်လာတာ နားကျောစိမ့်တက်သွားတယ်။ ပိပိလေးကိုရသလောက်ဖြဲ လျာကိုနက်နက်လေးထိုးထည့်လိုက်တယ် နီရဲနေတဲ့အတွင်းသားတွေကို ကြည့်ရင်း ညီတော်မောင်ကြီးက တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်ဗျာ။ ကျနော်ဒီချိန်ထည့်လိုက်ရင်သူမဘယ်ခံနိုင်လိမ့်မလဲ။ လိုးချင်စိတ်ကို မြိုချရင်းချော့နေ ရတာလေ။ အခုဆိုကျနော့်ရဲ့ဂျာချက်တွေ အောက်မှာသူမလဲပေါင်လေးကို ဟလိုက်စိလိုက်နဲ မျက်လုံးတောင်မဖွင့်နိုင် တော့ဘူး။ အစိလေးကိုချေပေးရင်း စောက်ခေါင်းလေးထဲ လျာနဲ့နာနာလေးမွှေပေးလိုက်တာ ။
ဟားး အထဲ အရည်တွေထွက်လာတော့သူမတချီပြီးသွားပြီ ဆိုတာသိလိုက်တယ်လေ ။ရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲ့ဗျာ ကျနော်ပေးတဲ့ကာမအရသာကို သူမထိထိမိမိရတယ် ဆိုတာသိလိုက်ရလို့။ ကျွန်တော်ရပ်မနေဘဲစောက်စိလေးကိုငုံခဲရင်း အဝလေးထဲကို လက်ခလယ်လေးထည့်မွှေလိုက်တယ်။ စောက်ရေလေးတွေနဲ့မို့ ချောခနဲဝင်သွားတယ်လေ။ သူမလဲကော့ပေးတယ်။ ကျနော်အားတက်သွားပီး သူမပိပိလေးကို ချိုချဉ်စုတ်သလို တအားစုတ်ငုံပစ်တော့တာ။ လက်ခလယ်လေးနဲ့လဲ တရဇတ် လိုးပေးလိုက်တော့ သူမဆီက တကယ့်ကိုကာမသံ စဉ်လေးတွေထွက်ကျလာတော့တာဘဲ။ အား အား အင်းးး ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဟင့် ကိုကို ရယ် အား အား အား ဖင်လေးကိုမြှောက်ပီး ကော့ပေးနေတော့တာ။ ကျနော်လဲ လက်ခလယ်နဲ့လိုးပေးရင်း ပိပိလေးကိုချဲ့ပေးနေလိုက်တယ် ဒါမှလီးထည့်ရင်နဲနဲအဆင်ပြေအောင်လေ။ သူမအရမ်းနာမှာစိုးလို့ပါ။ အရေတွေစိုရွှဲနေတဲ့ပိပိလေးထဲကို လက်ခလယ်လေးနဲ့လက်ညှိုးလေးကိုပူးပီးအသာလေးထည့် အစိလေးကိုငုံစုတ်လိုက်တယ်။
သူမကတော့ တိမ်လွှာတွေထက်ရောက်နေသလို မိန်းမောနေလေရဲ့။ အသာယာလေးလှုပ်ရှားရတာပေါ့လေ။ လက်နှစ်ချောင်းပူးနဲ့ ပိပိလေးထဲကိုအသားမွှေပေးနေလိုက်တယ်။သိပ်နက်နက်မထိုးရဲသေးဘူးလေ။ အစိလေးကိုချိုချဉ်စုတ်သလိုစုတ်နေတော့ သူမဘာသာကော့ကော့ပြီးလက်ကိုလိုးနေတယ်ဗျာ။ ကျနော်လဲလက်ကိုနက်သည်ထက်နက်အောင်ထိုးထည့်မွှေပစ်လိုက်တယ်။ သူမနုတ်ဖျားက ကာမသံလေးတွေက ဆူဆူညံနေပါရော။ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်လိုးပေးရင်း ပိပိတခုလုံးကိုနေရာလပ်မကျန်ယက် အစိလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုတ်ပစ်လိုက်တာ သူမတွန့်လိမ့်ကော့တက်သွားတယ်။ ကျနော်လက်ဝါးထဲမှာလဲ စောက်ရေထွက်ကျတာရွှဲလို့။ နောက်တချီပီးသွားတာသိလိုက်တယ်။ ကျနော့် တကိုယ်လုံးလဲထူပူနေပီ။ဒီထက်ပိုထိန်းမထားနိုင်တော့ဘူးလေ။ ပေါင်လေးကိုအောက်ကသိုင်းဖက်ရင်း ပိပိလေးတခုလုံးကအရေတွေကိုကုန်အောင်ယက်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့သူမမျက်ဝန်းတွေထဲမှာ တခုခုကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမှန်း ကောင်းကောင်းသိတယ်လေ။ သူမရဲ့ပေါင်ကြားထဲမှာဒူးထောက်ထိုင်ရင်း နိမ်ချည်မြင့်ချည်လှိုက်မောနေတဲ့ အပေါ်ပိုင်းတွေဆီလက်တွေရောက်သွားတယ်။
ကြွေရည်သုတ်ပန်ကန်းလေးတွေမောက်ထားသလို ဖြူဖွေးမို့မောက်နေတဲ့ နို့လေးတွေကို ကောင်းကောင်းစုတ်နယ်ရင်းနို့သီးပန်းရောင်လေးတွေကို ချေပေးလိုက်တယ်။ အား ဟင်း ဟင်း သူမမျက်လုံးတွေမှေးစင်းပီးညည်းတွားနေတယ်။ အောက်ကညီတော်မောင်ကလဲ ထောင်ထောင်နဲ့ ပိပိလေးကိုသွားစနေတယ်လေဗျာ။ နို့တွေကိုတဖက်ကိုအားရအောင်နယ် တဖက်ကကိုအငမ်းမရစွဲစို့ပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်လက်တွေကြားမှာသူမကော့ပျံနေပီ။ ကျနော်နို့စို့တာရပ်ပီး လီးနဲ့စပအကွဲလေးအတိုင်းပွတ်တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ နုညံ့တဲ့အသားစိုင်နှစ်ခုပွတ်တိုက်မှုဟာ ရင်ထဲမှာမီးတွေပွင့်ထွက်ကုန်တယ်။ အိပ်ရာခင်းတွေကိုစုတ်ကိုင်ရင်းသူမ အံကိုကြိတ်ထားတယ်။ ရင်တခုလုံးနိမ့်ချည်မြင်ချည်နဲ့အစွမ်းကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တာရယ် လိုးချင်စိတ်တွေရယ်ကြောင့် တကိုယ်လုံးထူပူတုန်ရီနေတယ်။
ပိပိလေးထဲ လီးဒစ်မြုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်းဆွတယ်။ သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားပီး အသာလေးကော့ပေးတယ်ဗျာ။ ကျနော်လီးကိုပိပိလေးထဲ လေးပုံတစ်ပုံလောက်နှစ်ချလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့အသားလေးလိုးပေးတယ်။ တခါထက်တခါ ပိုပိုနက်အောင်လီးကိုဖိသွင်းတယ်။ စေးကျပ်နေတဲ့နံရံတွေကိုထိုးခွဲဝင်သွားရတာ လီးတခုလုံးဖီညှပ်ထားသလိုဘဲ။ ပြန်ထုတ်ထဲချိန်မှာလဲကျပ်သိပ်နေတဲ့ပိပိလေးကလီးကှိုငုံစွဲထားသလို ရင်ထဲလှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ။ လိုးနေရင်းတနေရာမှာ နံရံလေးတခုနဲ့သွားထောက်နေတယ်။ သူမပေါ်မှောက်ချလိုက်ရင်း နခမ်းတွေကိုစုတ်နမ်းလိုက် တယ်။ ဖင်ကိုကြွပီးလီးကိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပီးတဆုံးဆောင့်ချလိုက်တယ်။ ကျောကိုသိုင်းဖက်ထားတဲ့လက်တွေက လက်သည်းတွေနဲ့ကုတ်ခြစ်ပီးမျက်စိစုံမှိတ်အော်တယ်။ အား နာတယ် နာလိုက်တာ တဲ့။ ခနလေးနော် နောက်မနာတော့ဘူးနော် ချစ်လေး သူမကိုချော့ရင်း လည်ပင်းလေးတလျောက်စုတ်နမ်းလိုက် နာလွန်းလို့မဲ့နေတဲ့ နခမ်းလေးတွေကိုစုတ်နမ်းလိုက်နဲ့ အသာလေးညှောင့်လိုးနေလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးဇောချွေးတေနဲ့ဗျာ။
သူကိုသိမ်းကြုံးဖက်ရင်း လီးကိုတဝက်လောက်ပြန်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်နဲ့မှန်မှန်လေးလိုးပစ်လိုက်တယ်။ သူမကတော့မျက်စိစုံမှိတ်ပီး ကျနော့်ကို ကျစ်နေအောင်ပြန်ဖက်ထားတယ်။ ပေါင်လေးကိုလဲဖြဲကားပီးအလိုက်သင့်လေးနေပေးတယ်။ သူမကြိတ်ခံနေတာတွေတော့ ကျနော်လဲအားတက်လာပီး သွက်သွက်လေးလိုးပေးရင်း နို့တွေကိုစုတ်နယ်ပေး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုခြေပေးလိုက်တယ်။ ဇွတ် ဇွတ် ဇွတ် အွန်း အင်းး အင်း ဟင်း အင်း အပျိုပိပိလေးက ကြပ်သိပ်စေးပိုင်နေတာ လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ။ ကျနော်တအားမဆောင့်ဘဲ ခပ်သွက်သွက်မှန်မှန်လိုးပေးတယ်။ မဆောင့်ရက်ပါဘူး အသစ်စက်စက်နံရံလေးတွေက ကျနော့်ရဲ့လီးကိုကျင့်သားမှမရသေးတာ။နောက်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကြိုက်ပေါ့လေ။ တော်တော်လေးလိုးပီးတော့ သူမခံနိုင်လာပီထင်၊ကျနော့်လီးထည့်လိုက်တိုင်း ခါးလေးကော့ပေးပီး ပိပိကဆွဲညှစ်ထားတယ်။ ကျနော်လဲ တင်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ဝတ်လစ်စလစ်လေးနဲ့ တအင်းအင်း တအားအားအော်နေတဲ့ ချစ်သူလေးကိုအပေါ်စီးကကြည့်တာနဲ့တင်တဝက်ကပီးချင်နေတာ။
သူမ ကိုယ်ပေါ်မှောက်ချပီးဂျိုင်းအောက်ကနေလက်သိုင်း ပခုံးတွေကိုခိုအားယူ အဆုံးထိရောက်အောင်သွင်းပစ်လိုက်တယ် ကျနော်လီးကြီးကို ဒစ်ထိဆွဲထုပ်ရင်း ပိပိလေးထဲကို သွက်သွက်လေးလိုးပစ်တော့ သူမဆီက အော်ညီးသံလေးတွေ ပလုံစီနေပီလေ။ ကျနော့်လည်ပင်းကိုသိုင်းဖက်ရင်း ကော့ပျံတွန်းလိမ်နေတဲ့သူမနို့လေးတွေက ကျနော့်ရင်အုံကိုပွတ်တိုက်နေတယ်။ ပိပိလေးနဲ့ ကျနော်ဆီးခုံကလဲ အချက်ကျကျထိခတ်နေတယ်။လီးပြန်အထည့်နဲ့ ကော့ပေးတာနဲ့အချက်ကျကျလှုပ်ရှားမိချိန်တွေစိပ်လာတယ်။ သူမဖင်လေးက အောက်ကိုပြန်မကျတော့သလို ကျနော့်ကလဲအပေါ်ကအဆက်မပြတ်ကိုလိုးနေတော့တာ။ လီးကိုစုတ်စွဲထားထဲ့ပိပိထဲလိုးနေရင်းတိမ်တိုက်တွေပေါ်စီးမျောသွားသလို အထွတ်ထိပ်ထိရောက်သွားကြပီ။ အား ကိုကိုရယ် သူမတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးပီးကျနော့်ခါးကိုပေါင်နှစ်ဖက်နဲ့အသေညှပ်ထားသလို ကျနော်လဲသူမရဲ့ပိပိထဲလီးတဆုံးထည့်ရင်းဆီးခုံကိုဖိတွန်းထားတယ်။ ရင်ခွင်ချင်းအပ်ပီးတယောက်နဲ့တယောက်ကျစ်နေအောင်ဖက်ထားရင်းသူမနခမ်းဖူးတွေကို အားပါးတရစုတ်စွဲနမ်းရှိုက်လိုက်တယ်လေ။
အရမ်းချစ်တယ်ကွာ… ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ယောက်ဆန္ဒတွေပြည့်သွားပီး တယောက်ကိုတယောက်တင်းကြပ်စွာဖက်ရင်း အနမ်းတွေပေး နေမိတယ်။ သူမနခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုတ်ဆွဲယူပီးမွှေးကျူရင်းမေးလိုက်မိတယ်. ‘ကိုယ့်ကို ချစ်လားဟင်’ သူမယဲ့ယဲ့ပြုံးပီးပြန်ပြောတာက ‘အော် ကိုကိုရယ်။ မိန်းမသားတယောက်အတွက် အပျိုစင်ဘဝဆိုတာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါ။ အဲဒါကိုကို ကိုပေးလိုက်ပီးလေ။ ဒီထက်ပိုပီးဘယ်လိုချစ်ပြရအုံးမှာလဲ။’ အဲလိုပြောရင်းစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူမမျက်ဝန်းတွေကိုငေးကြည့်ရင်းကကျနော့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးမှန်းမသိဘူးဖြတ်စီးဆင်းသွားတယ်။ သူမကို ကျစ်နေအောင်ဖက်ထားရင်း အားရအောင်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ အနမ်းတွေထဲမှာတက်မက်နှစ်သက်မှုတွေ မခွဲနိုင်မခွာရက် ချစ်ခြင်းတရားတွေအပြည့်။ခြေရင်းမှစောင်ကိုဆွဲယူပီးမောဟိုက်နေသောသူမကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲထည့်ကာနှစ်ယောက်သားခြုံအိပ်ပစ်လိုက်သည်။
ခနပါဘဲ မှေးခနဲပျော်သွားပြီးပြန်နိုးတော့သူမကရင်ခွင်ထဲမှာအိပ်နေတုန်း။ သူမဆံနွယ်လေးတွေကို အသာယာပင့်သပ်တင်ပေးပြီး နဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ချစ်သူလေးနိုးမှာစိုးလို့အိပ်ယာက အသာလေးထ စောင်လေးပြင်ခြုံပေးလိုက်တယ်။ အဝတ်တန်းပေါ်က တဘက်ကိုခါးမှာစည်းပီး ရေချိုးခန်းဝင်ရေမိုးသန့်စင် အဝတ်စားလဲပီးတဲ့ထိ သူမကအိပ်နေတုန်းဗျ။ ကျနော် စာကြည့်စားပွဲပေါ်က note book လေးထဲမှာစာတချို့ရေးပီး ကုတင်ဘေးကစာပွဲအသေးလေးပေါ်တင်ပီး စားပွဲတင်နာရီနဲ့ဖိခဲ့လိုက်တယ်။ ချစ်လေး ကိုကို နေ့လည်ဝါးတီးအတွက် သွားဝယ်မယ်။ သော့ခတ်ခဲ့မယ်။ ဘယ်သူလာလာမထွက်နဲ့။လူမရှိတဲ့အတိုင်းဘဲနေနော်။ ကျနော်အိပ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပီး ဖိနပ်ချွတ်က ချစ်လေးရဲ့ဖိနပ် ဧည့်ခန်းထဲက လက်ကိုင်အိပ်ကိုယူပီး ကျနော့်အခန်းထဲထည့်တခါးတွေအားလုံးပိတ် တခါးမကြီးကိုသော့ခတ်လိုက်တယ်။
ခြံထဲကဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းထွက်လာပီး ခြံတခါးကိုတခါသော့ခတ်တယ်။ တလမ်းကျော်ကစားသောက်ဆိုင်ကို အမြန်လေးမောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ဒီဆိုင်ကလက်ရာကောင်းတော့ လူများပီးနဲနဲကြာတယ်။ ထမင်းဖြူ ခေါက်ဆွဲကြော် အစိမ်းကြော် အသားကင်တွေမှာရင်း စီးကရက်တလိပ်ဖွာနေလိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့သောအကြောင်းတွေကရုပ်ရှင်ပြကွက်တွေလိုကျနော့်ခေါင်းထဲအစီရီပေါ်လာသည်နှင့်အမျှတွေးနေမိပီ။ကျနော် စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ချစ်လေးအပေါ်လွန်ကျူးမိခဲ့ပြီ။ သူမကို ကျနော်တာဝန်ယူရမယ်။ အမြန်ဆုံးလက်ထပ်နိုင်အောင် ကျနော်ကြိုးစားရမယ်။ တာဝန်ယူဖို့ဆိုသည်ထက် ချစ်လေးကိုမခွဲနိုင်အောင်ချစ်မိလို့လက်ထပ်တယ်ဆိုပိုမှန်လိမ့်မယ်။ အကို မှာထားတာတွေရပီ အော် အေး အေး ဘယ်လောက်ကျလဲ ကျနော် ကျသင့်ငွေရှင်းပီး စားစရာများကိုယူကာ ဆိုင်ကယ်ကိုအမြန်မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲမှာသူမဆာနေရော့မယ်ပေါ့။
နဖူးလေကိုနမ်းပီးထွက်သွားတာကို ချစ်လေးသိပါတယ်။ ယောကျာင်္း ပီသတဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအသာလေး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ြပီးခိုးကြည့်နေမိတယ်။ ကိုကိုကတော့မသိရှာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ သူလုပ်စရာရှိတာလုပ်နေတယ်လေ။ တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့။ နောက်မှ တန်းပေါ်ကတဘက်ကိုယူပီးခါးမှာပတ်လိုက်လို့ တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင်ချစ်လေးရယ်မိတော့မှာ။ သူစာထားပီးထွက်သွားတော့ ချက်ချင်းမထသေးဘဲသူ့ခြေသံကိုနားထောင်နေလိုက်တယ်။ နောက်တခေါက်ပြန်တက်လာသံကြားတော့ စောင်ထဲပြန်ပုကွေးနေလိုက်တယ်။ ချစ်လေး အိပ်နဲ့ဖိနပ်တွေကို လာထားတာ။ ဖိနပ်ကိုကိုင်လာတာ စိတ်ထဲအားနာမိသွားတယ်။ တံခါးပိတ်သံ သော့ခတ်သံ ဆိုင်ကယ်သံပျောက်သွားတော့မှ သက်ပြင်းမောချရင်း ပျင်းကျောဆန့်လိုက်တယ်။
ပီးတော့သူထားခဲ့တဲ့စာလေးကို အမြန်သွားယူဖတ်ကျိပီး သူမကုတင်ပေါ်ပက်လက်ပြန်လှဲချရင်း ပြုံးနေမိတယ်။ ကုတင်ပေါ်ကထပီး ရေချိုးခန်းဝင် ရေပန်းခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ အေးစိမ့်စိမ့်ရေမှုန်တွေက ကိုယ်လုံးတီးခန္ဒာကိုယ်ပေါ်ကချေးညှော်တွေကိုတိုက်ချ သွားနိုင်ပေမဲ့ ချစ်လေးဘဝလေးကိုပြန်လည် မစင်ကြယ်စေနိုင်တော့ဘူးလေ။တွေးရင်းသက်ပြင်းတချက်ချလိုက်မိတယ်။ ကိုယ်အနှံ့ပွတ်သတ်ရင်း ပိပိလေးနေရာကချွဲကျိနေတာတွေကို အသာလေးပွတ်ဆေးလိုက်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်မို့ နာကျင်ကျိန်းစပ်စပ်လေးဖြစ်နေတယ်။
မိဘအုပ်ထိန်းမှု သွန်သင်မှုတွေကို စည်းကမ်းတကျနဲ့လေးစားလိုက်နာရုံမက ကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းတပ်သူ။ သူမမျက်ရည်တွေက ရေစက်ရေပေါက်တွေနဲ့ ရောယှက်ကုန်ပီ။ ရေပန်းအောက်မှာထိုင်ချရင်း မျက်ဝန်းမှမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျနေမိတယ်။ အို ငိုနေလို့လဲ ငါကအပျိုပြန်ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာ။ ကိုကိုက ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာနေမှာပါ။ ငါ့ကိုလက်ထပ်မှာပါ ချစ်လေးအတွေးနဲ့ စိတ်ကိုပြန်တင်းလိုက်တယ်။ ရေပန်းကိုပိတ် တဘက်ကိုပတ်ပီး ရေချိုးခန်းအပြင်ပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ ခေါင်းကဆံပင်ကို ရေသုပ်ရင်းမှန်တင်ခုံရှေ့မှထိုင်ပီးသူကိုယ်သူပြန်ကြည့် လိုက်တယ် ငါအပျိုမဟုတ်တော့ပါလား ယောကျာင်္းတယောက်နဲ့အလိုးခံပီးပီ ဆိုသောစိတ်ကပြန်ဝင်လာပီး မျက်နှာညှိုးကျသွားတယ်။
စိတ်ကိုဖျောက်ပီး ကိုယ့်မျက်နှာလေးကို သေချာကြည့်လိုက်တယ်။ ခုနငိုထားတော့မျက်လုံးလေးကဖောင်းပီး နှာသီးလေးရဲနေတာ ကိုကိုပြန်လာရင်တွေ့တော့မှာဘဲ။ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာလဲ ယောကျာင်္းသုံးပစ္စည်းတွေချည်းမို့ စလင်းဘက်အိပ်ကိုဖွင့်ပီး အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ် အလှပြင်မယ်လေ။ ချစ်လေးက ဘယ်သွားသွား စုံစီနဖာဆောင်တပ်သူမို့ ပစ္စည်းကအစုံနီးပါးပါတယ်လေ။ နခမ်းနီ၊ လက်သန်းလောက်နို့ရည်ပုလင်းလေး၊မိတ်ကပ်ရည်ပုလင်းသေးသေးလေး၊ ….. ကိုကို့မှန်တင်ခုံပေါ် အကုန်စီချပီးအလှပြင်ရင်းကိုကို့ ကိုစောင့်နေလိုက်တယ် …… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စောငျ့ရသူ